Banbaano lagu weeraray Barkontrool oo Walanweyn ku taala | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Banbaano lagu weeraray Barkontrool oo Walanweyn ku taala
Banbaano lagu weeraray Barkontrool oo Walanweyn ku taala
Wararka aan helaynaya ayaa waxay sheegayaan in Weerar bambaano xalay lagu qaaday Bar-koontorool oo Ciidamo ka tirsan Daraawiishta Maamulka Koonfur Galbeed ku leeyihiin degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan sida ay warbahainta guduhu qorayso.
Goobta weerarka Bambaano lagu qaaday ayaa waxaay ku taal dhanka galbeed wadada aada magaalada Beydhabo ee xarunta Gobolka Baay, waxaana dadka ugu badan ee wax ku noqday lagu sheegay inay yihiin Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Koonfur Galbeed waxaaan weerarkaas kadib la maqlayay raasaas sida ay goobjoogeyaal sheegeen.
Askarta ku dhaawacantay weerarkaasi bambaano ayaa waxaa la geeyay Isbitaalka degmada Walanweyn,weerarkas kadibna ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa waxay sameeyeen howlgal ay ku baadi goobayeen dadkii ka dambeeyay.
Degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa labadii sano ee la soo dhaafay waxaa kajiray xaalado amni darro oo ay ugu weyn tahay dagaalo laba maleeshiyo Beeleed ku dhex-maray Gudaha iyo daafaha degmada Walanweyn ayadoo mararka qaarna ay weeraro noocaan oo kale ah ay ka dhacaan.
Previous articleNew Zealand iyo Vietnam oo lagu sheegay wadamada si weyn ula tacaalay cudurka COVID-19
Next articleDHAGEYSO:C/wali Cali gaas oo ka hadlay Dagaalka Gobolka Gedo